I-Apple Pay inokubonelela ngenkxaso kwiCoinbase kungekudala | Ndisuka mac
Ukuqhuma kwee-cryptocurrensets kwilizwe lethu akuyona into entsha kodwa kuyinyani ukuba kumaxesha akutshanje baqhuba kwaye baba neqonga ICoinbase yaya esidlangalaleni kungekudala Ngexabiso lentengiso ye-80 yezigidigidi zeedola ke kubonakala ngathi ii-cryptocurrensets ziyafana.
Le yimarike ekude nobulumko bethu kodwa iindaba zamva nje malunga nokuba iApple Pay iyahambelana nekhadi leVisa yeqonga elidumileyo le-cryptocurrency Coinbase, lenza wonke umntu Makhe sijonge ekukhuleni kwezi cirptocurrencies ngamehlo ahlukeneyo.
Kwiwebhu edumileyo MacRumors Ufumene ubungqina benkxaso ye-Apple Pay yekhadi le-Coinbase kwikhowudi ye-Coinbase. Oku kubonakala ngohlobo lomfanekiso yongezwa eqongeni enegama "CardGoogleApplePay".
Ikhadi leCoinbase yale nkampani Sele ixhasa uGoogle Pay ukusukela nge-Matshi 2020 kwi-EU nase-UK, Kodwa okwangoku ayisiyo-Apple Pay. Ukongeza, ikhadi leCoinbase labasebenzisi baseMelika alikahambelani nayo nayiphi na iplatifomu yokuhlawula yedijithali, ke ukufika ngeApple Pay kunokuba yimpumelelo yokwenyani kubo bobabini.
Siqinisekile ukuba ii-cryptocurrensets ziya kuqhubeka zikhula ngesantya esifanelekileyo kunye namaqonga anjengeCoinbase nawo. Sijongene nento ebonakala ngathi inguquko kwindlela yotyalo-mali yokonga iinkampani kunye nabasebenzisi. Siza kubona ukuba kwenzeka ntoni ngeli khadi elitsha lifunyenwe kwikhowudi ukuba lihambelane neApple Pay.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » I-Apple Pay inokubonelela ngenkxaso yeCoinbase kungekudala
Amagama amathathu amatsha e-BAFTA Umabonwakude kwi-Apple TV +